Current Number:7regions,7states, 1 Union Territory,6self-administered zones
tuing:desa.kri: in Burmese pronounced as /táɪɴ dèθa̰ dʑí/
pranytaungcu.nai-mre in Burmese pronounced as /pjìdàʊɴzṵnɛ̀mjè/
kuiypuing-uphkyuphkwang.ra.desa. in Burmese pronounced as /kòbàɪɴ ʔoʊʔtɕʰoʊʔ kʰwɪ̰ɴja̰ dèθa̰/
kuiypuing-uphkyuphkwang.ra.tuing: in Burmese pronounced as /kòbàɪɴ ʔoʊʔtɕʰoʊʔ kʰwɪ̰ɴja̰ táɪɴ/
Sagaing Region Sagaing MM-01 North 5,325,347 93,704.8 Region
News: တိုင်းခုနစ်တိုင်းကို တိုင်းဒေသကြီးများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများ ရုံးစိုက်ရာ မြို့များကို လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွင် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်များကို လည်းကောင်း သတ်မှတ်ကြေညာ . . 20 August 2010 . 23 August 2010 . Burmese.
Web site: Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008). PDF. Upload.wikimedia.org. 16 January 2018.